ရထားကိုစွန့်စားမှုပိုရရန် - ငွေရလွယ်ကူစေနိုင်ပုံ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > ရထားကိုစွန့်စားမှုပိုရရန် - ငွေရလွယ်ကူစေနိုင်ပုံ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 24/10/2020)
ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည်ထူးကဲသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆုများစွာရနိုင်သည်. ရထားများကသင့်အားရှုခင်းနှင့်နီးကပ်စေသည်: အဲသိုးစု၏အလယ်ထိုင်ခုံမှ tulips တစ်ခု၏အနံ့ကိုသိုးများစားကျက်နေသည်သို့မဟုတ်ရှူရှိုက်နေသည်ကိုသင်မတွေ့ရပါ။. ရထားများကသင့်ကိုအစွန်အဖျားအထိသယ်ဆောင်နိုင်သည် နှင့် အချိန်တန်ရင်မြို့လယ်ခေါင်မှာငွေသွင်းမယ်. သင်တစ် ဦး ထံမှဆန့်ခြင်းနှင့်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်စကားပြောဆိုနိုင်ပါတယ် အဆင်ပြေအကွာအဝေး သင်ရထားစီးတဲ့အခါမှာသူချင်းခရီးသွားများနှင့်အတူ. အချို့ကရထားခရီးစဉ်သည်မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ဆုဖြစ်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်, ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးကြီးသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်တက်ကြွသောအစဉ်အလာကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်. သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင့်အတွက်ကူညီနိုင်သောအခြားဆုလာဘ်တစ်ခုအကြောင်းပြောရန်ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိနေသည် ပိုပြီးရထားစီးယူပါ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့အကွာအဝေးကိုကြည့်ပါ။ ရထားကိုစွန့်စားရမှုတွေကဘတ်ဂျက်ကိုပိုပြီးအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ. သူတို့သည်ခရီးသွားခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများမှထုတ်ပေးသောဆုများဖြစ်သည်. ပြီးတော့သူတို့စုဆောင်းတာဟာသင်အိပ်မက်ရတဲ့အားလပ်ရက်တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
1. ရထားကိုစွန့်စားမှုပိုရရန် - ငွေရလွယ်ကူစေနိုင်ပုံ: ခရီးသွားခရက်ဒစ်ကဒ်သည်မတူပါ
လူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရိုးရာခရက်ဒစ်ကဒ်ပြားကိုအကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံအိတ်တွင်သိမ်းထားလေ့ရှိသည်. တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်ကပ်ထဲ၌ငွေအမြောက်အမြားမပါ ၀ င်ရန်အကြွေးဝယ်ကတ်ကိုသာသယ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်များနိုင်သောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်ငါတို့ခရီးသွားတဲ့အခါ. ကျွန်ုပ်တို့ခရက်ဒစ်ကဒ်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတခါတည်းငွေပေးချေရန်မတတ်နိုင်သော ၀ ယ်ယူမှုများအတွက်ငွေပေးချေရန်လည်းကူညီသည်, သူတို့လိုအပ်ချက်များသို့မဟုတ်ကောင်းတဲ့ -to- ရှိသည်. ဒါကပထမ ဦး ဆုံးအလေ့အကျင့်တစ်ခုခရီးသွားအကြွေးသုံးစွဲဖို့useုံကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. တကယ်တော့, သင်၏ခရီးသွားခရက်ဒစ်ကဒ်မှဆုများရရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာ၎င်းကိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်ကြီးမားသောဝယ်ယူမှုသည်. သို့သော်ခရီးသွားခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါဒုတိယအလေ့အကျင့်သည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်. အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, နေ ခရက်ဒစ်ကဒ်စက်ရုံမှပေးသောပျမ်းမျှအတိုးနှုန်း တစ်ခုလုံးအနေဖြင့်သင်အားနည်းသောအားနည်းချက်များစွာကိုတွေ့နိုင်သည် 14.52%, အချို့ခရီးသွားလာခရက်ဒစ်ကဒ်များသည်ကောက်ခံသည် 25%. ထိုအများစွာသောကြောင်း၏ထိပ်ပေါ်မှာကြီးမားကျယ်ပြနှစ်စဉ်အခကြေးငွေကောက်ခံ. ခရီးသွားခရက်ဒစ်ကဒ်တွင်ငွေအမြောက်အများကိုသယ်ဆောင်ခြင်းသည်သင်၏အတိုးနှုန်းကိုအချိန်တိုအတွင်းမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်. ထို့ကြောင့်ခရီးသွားခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုသည့်ပထမစည်းမျဉ်းသည်ငွေတောင်းခံခြင်းသံသရာတစ်ခုတွင်သင်တတ်နိုင်သည်ထက်ပိုပိုပြီးအားသွင်းရန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါ။.
2. Travel Credit Card အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ခရီးသွားခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်သင်၏လုပ်ငန်းကိုစိတ် ၀ င်စားကြသည်. ၎င်းတို့သည်အခြားကုမ္ပဏီများနှင့် ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်. ထူးခြား။ ကြံ့ခိုင်သောဆုလာဘ်အစီအစဉ်ကိုသူတို့စျေးကွက်တွင်ခွဲခြားသိမြင်စေပြီးဖောက်သည်များအားဆွဲဆောင်သည်မှာအဓိကဖြစ်သည်.
အခွင့်အရေးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြေး. အချို့ကုမ္ပဏီများသည်သင့်အားမကြာခဏလက်ကမ်းကြော်ငြာများဖြင့်ဆုချသည်. မင်းကနယူးယော့ခ်ျကိုသင် Bordeaux ကိုမြည်းစမ်းဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုပါစို့, သင်၏ခရီး၏ပထမအပိုင်းသည်ပါရီသို့ပျံသန်းဖွယ်ရှိပြီးသင်၏ခရီးအတွက်အကြီးမားဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်နိုင်သည်. (သငျသညျအချို့သောအလွန်ရှားပါးသောစပျစ်သီးကိုမြည်းစမ်းနေမဟုတ်လျှင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ!) သင်ရရှိသောမကြာခဏပျံသန်းနိုင်သောမိုင်များသည်သင့်အတွက်ထိုလေယာဉ်လက်မှတ်ကို ၀ ယ်နိုင်သည်. အချို့သောခရီးသွားခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ဆုလာဘ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နှစ်စဉ်အဖော်လက်မှတ်များပါ ၀ င်သည်, ဒါကြောင့်သင်ဟာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုစွန့်စားမှုတစ်ခုယူဆောင်လာနိုင်ပါတယ်. အခြားကုမ္ပဏီများကသင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကို ပို၍ ပျော်စရာကောင်းစေမည့်ဆုများပေးသည်, ပထမတန်းစားအဆင့်မြှင့်တင်မှုများမှသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလေဆိပ်များရှိလေယာဉ်ကွင်းများသို့သီးသန့်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိသည်. ဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များရှိအထူးလျှော့စျေးများသည်အချို့သောခရီးသွားခရက်ဒစ်ကဒ်၏ဆုလာဘ်ဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပါ ၀ င်သည်.
3. ရထားကိုစွန့်စားမှုပိုရရန် - ငွေရလွယ်ကူစေနိုင်ပုံ: အခွင့်အရေးကျွန်ုပ်တို့၏ရွေး
သင်ရနိုင်သမျှပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးမှာသင်၏ဝယ်ယူမှုများတွင် cashback ဖြစ်သည်. အဆိုပါ အကောင်းဆုံးခရီးသွားခရက်ဒစ်ကဒ်များ ပေးဆောင် 2% သင့်ရဲ့ဝယ်ယူမှုအားလုံးအပေါ်ပြန်. အချို့သည်သူတို့၏ cashback ရာခိုင်နှုန်းကိုများများစားစားတိုးပွားစေသည် 6% ကို select အမျိုးအစားထဲမှာ, လေယာဉ်ခရီးစဉ်အပါအဝင်, ထမင်းစားခန်း, နှင့်ဟိုတယ်ဝယ်ယူမှု. အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ခရီးသွားခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုပုံမှန်စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဲ့သို့သောနေ့စဉ်ပစ္စည်းများအတွက်ငွေပေးချေလျှင်ပင်ငွေသားအကျိုးကျေးဇူးများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးမြှင့်နိုင်သည်။, သင်၏နောက်ရထားစီးအပါအ ၀ င်. ဒါပေမယ့်တစ်ဖန်, လစဉ်လတိုင်းသင်၏လက်ကျန်ငွေကိုပြန်ဆပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်သင်၏ခရီးသွားခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်.
ခရီးသွားခရက်ဒစ်ကတ်များသည်သင်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုတွက်ချက်ရန်အတွက်အမှတ်စနစ်တစ်မျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုလေ့ရှိပြီးထိုစနစ်များသည်ရှုပ်ထွေးလေ့ရှိသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, သင်ကမည်သည့်အချက်များကိုမဆိုရနိုင်မီအချို့သောကတ်များသည်အနည်းဆုံး ၀ ယ်ယူမှုလိုအပ်ချက်ရှိသည်. ဥပမာ, သင်လုပ်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည် $1000 သင်ရမှတ်များမစတင်မှီသုံးလတာကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်မက ၀ ယ်ယူမှုများပိုမိုများပြားလာသည်. သင်၏ခရီးသွားခရက်ဒစ်ကဒ်သို့လေကြောင်းလိုင်းလက်မှတ်တစ်ခုထည့်ခြင်းသည်အနိမ့်ဆုံးနှင့်ပြည့်မီရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. သင်၏ကဒ်ကိုနေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်လအနည်းငယ် အသုံးပြု၍ လည်းတွေ့နိုင်ပါသည်. သင်၏အသုံးစရိတ်ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီရန်လစဉ်သင်လမ်းပေါ်ရောက်နေစေရန်သင့်ဝယ်ယူမှုများကိုခြေရာခံရန်သေချာပါစေ.
သင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားမှာပန်းသီးနှင့်ဆင်တူသောပန်းသီးတစ်လုံးစီကိုပန်းသီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ဖြစ်သည်. သင်သည်ကဒ်တစ်ခုစီ၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးကိုဖမ်းယူပြီးမျှတသောနှိုင်းယှဉ်မှုပြုလုပ်ရန်သေချာစေရန်သင်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်စာရင်းဇယားတစ်ခုဖန်တီးလိုပေမည်။. အကျိုးစီးပွား APRs ထည့်သွင်းရန်သေချာစေပါ, အနည်းဆုံးဝယ်ယူလိုအပ်ချက်များကို, cashback ရာခိုင်နှုန်း, သင်၏တွက်ချက်မှုတွင်သင်၏ကဒ်ကိုနှစ်စဉ်ကြေးပေးရမည်.
5. ရထားကိုစွန့်စားမှုပိုရရန် - ငွေရလွယ်ကူစေနိုင်ပုံ: နောက်ဆုံးအကြံပြုချက်တစ်ခု
Wanderlust ဟာဖိနှိပ်လို့မရတဲ့တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်. ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်, ကျွန်ုပ်တို့သည်တာဝန်သိသောချေးငွေကိုအသုံးပြုရန်တိုက်တွန်းပါသည်. လည်း, သင်၏ဂြိုလ်ကိုသင်၏တာ ၀ န်ယူမှုကိုစဉ်းစားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည်. ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနည်းသောခရီးသွားရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ခြင်း, ကဲ့သို့ ရထားခရီးသွားလာ အစားသင့်ရဲ့နောက် ဦး တည်ရာကိုစူးစမ်းဖို့မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်, ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု၏အခြေခံသဘောတရားများကိုမှန်ကန်ဖြစ်စဉ်ကိုခရီးသွားရန်နည်းတစ်နည်းဖြစ်သည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ဥရောပ၌သင်၏အားလပ်ရက်များကိုရထားဖြင့်စီစဉ်နိုင်ရန်ကူညီပေးပါမည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့်ဘတ်ဂျက်နှင့်ပိုမိုရင်းနှီးရလွယ်ကူစေရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်” ဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ကိုတင်လိုပါသလား။? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/train-adventure-budget-friendly/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, မင်းတို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးရထားလမ်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ် https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, သင် / pl မှ / fr ပြောင်းလဲနိုင်သည်သို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများ.
ရိုးရိုးလေးပါ ခရက်ဒစ်ကတ် ရသ ရထားခရီးသွား TravelCreditCards
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထား Travel တူရကီ, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား